Abenzi beSaddle Fusion Machine, abahlinzeki - China Saddle Fusion Machine Factory
Isihlalo se-Saddle Fusion-SDM1200
Ukusebenza Nesici Kukulungele ukuqamba i-PE yokunciphisa tee ku-workshop. Umsebenzi ohlanganisiwe wokushisela nokuthinta unika amandla ukuqedela yonke inqubo yokuqamba. ► Isikhunta se-PTFE esikhiphekayo esishisayo. ► Hlukanisa amarekhodi esikhathi esineziteshi ezimbili ezigabeni zokungena nokupholisa. ► Imitha yengcindezi ephezulu enembile ekhombisa ukufundwa okucacile. Izindlela zomhlahlandlela eziqondile zifakwe ipuleti lokushisa nepuleti lokuhudula. Ukulawulwa kwe-PLC kuyatholakala ngenqubo ezenzakalelayo yokuqinisekisa ukushisela okuphezulu st ...
Isihlalo se-Saddle Fusion-SDM630
ISaddle Fusion Machine-SDM315